Tartan madaxweyninimo oo burburiyey guur 8 sano jirey (Sheeko qosol & yaab leh) – SBC
Tartan madaxweyninimo oo burburiyey guur 8 sano jirey (Sheeko qosol & yaab leh)
Sandara Toress oo aheyd xaaskii madaxweynaha wadanka Guatemala Álvaro Colom oo iminka lagaga guuleystey wareegii koowaad ee doorashooyinka madaxtanimo ee dalkaasi ayaa noqotey marwadii ugu calafka xumeyd ka dib markii ay saygeeda isaga furtrey si ay ugu tartanto tartanka doorashada madaxtinimo ee dalkaasi.
Sandra Toress ayaa bishii March ee sanadkan waxaa xisbiga hogaamiya wadankaasi ee ninkeeda Colom uu hogaamiyaha ka ahaa wuxuu u sharaxay inay u tartanto doorashada sanadkan, laakiin dastuurka dalkaasi gaar ahaan qodonka 182 ayaa dhigaya qof kasta oo u tartamaya jagada madaxweynaha inaanu wax xiriir qoys & shaqo midna la laheyn madaxweynaha taasi oo keentey in Toress ay go’aansato inay iska furto madaxweyne Álvaro Colom .
Sandra Torres markii ay furiinkaasi shaacisay ayna isku diyaarisay inay tartanka doorashada u istaago ayaa maxkamada sare ee dalkaasi waxay ku tilmaamtey in talaabadaasi aanay aheyn mid xalaal ah, isla markaana wax mamnuucdey inay Mss Toress ay u istaagto doorashada.
Sandara oo 55 sano jir ah isla markaana ah aqoonyahanad waxaay is qabeen madaxweyne Álvaro Colom mudo 8 sano ah, balse guurkaasi hami xil doon madaxwene ayaa meesha ka saarey, waxaana ay waydey saygeedii & madaxtinimadii ay calmatey.
Doorashooyinka oo aanu ka qayb galeyn madaxweyne Álvaro Colom oo xilka ka dagaya 2012-ka wuxuu xilka qabtey 2008-dii waxaana wareegii hore ee doorashada isku hirdiyey Otto Pérez Molina oo helay codad gaaraya 36% halka Manuel Baldizón oo kaalinta labaad galey waxaana doorashooyinka oo loo dareeray axadii dhaweyd la filayaa in wareeg labaad fooda isku dareen labada musharax waxaana la qorsheeyey inay dhacdo bisha November ee soo socota.